Laga soo bilaabo Mar. 18 illaa 20, shirkadeennu waxay kaqeyb gashay FIC 2019 oo lagu qabtay magaalada Shanghai sanadkiiba hal mar. Bandhigu waa mid ka mid ah bandhigyada waaweyn ee warshadaha dawooyinka, oo ay ka qaybgaleen tobanaan kun oo qof. Kasoo qaybgalkan, waxaan fursad u leenahay inaan si fool ka fool ah ula xiriirno wax badan ...
2018 CPHI Shiinaha
Laga soo bilaabo Juun 20 illaa 22nd, shirkadeena ayaa kaqeybgashay bandhigga CPHI oo lagu qabtay magaalada Shanghai sanadkiiba hal mar. Bandhigu waa mid ka mid ah bandhigyada waaweyn ee warshadaha dawooyinka, oo ay ka qaybgaleen tobanaan kun oo qof. Kaqaybqaadashadan, waxaan fursad uheleynaa inaan si fool-ka-fool ah ulaxirirno ...
Laga soo bilaabo 15-kii illaa 17-kii Maajo, shirkadeennu waxay ka qaybgashay bandhiggii Vitafoods ee lagu qabtay magaalada Geneva, Switzerland. Bandhigu waa bandhig warshadeed saameyn ku leh warshadaha cuntada ee Yurub oo ay la socdaan tobanaan kun oo kaqeybgalayaal ah. Iyadoo loo marayo bandhiggan, waxaan fursad u leenahay inaan si fool ka fool ah u qabanno ...
Laga soo bilaabo Sebtember 11th ilaa 13th, 2019, shirkadeena ayaa kaqeyb qaadatay bandhigyada Cunnada Cunnada Aasiya ee lagu qabtay Bangkok, Thailand. Bandhigu waa bandhig warshadeed saameyn ku leh warshadaha cuntada ee Aasiya, oo ay ku jiraan tobanaan kun oo kaqeybgalayaal ah. Thailand waxay leedahay awood suuq oo ballaaran, gaar ahaan ...
Laga soo bilaabo Nofeembar 26th ilaa 28th, 2019, shirkadeena ayaa kaqeyb qaadatay bandhigga CPHI ee lagu qabtay magaalada New Delhi, India. Bandhigu waa bandhig waxsoosaar oo saameyn ku leh warshadaha dawooyinka iyo cuntada ee Aasiya, oo ay ku jiraan tobanaan kun oo kaqeybgalayaashu. Hindiya waxay leedahay awood ballaaran oo suuq ah, gaar ahaan ...
Laga soo bilaabo Nofeembar 5 illaa 7th, 2019, waxaan kaqeyb qaadannay bandhigga CPHI ee lagu qabtay Frankfurt, Jarmalka. Bandhigu waa bandhig warshadeed saameyn ku leh soo-saarka dawooyinka Yurub iyo warshadaha cuntada, iyada oo tobanaan kun oo kaqeybgalayaashu kaqeyb galayaan. Yurub waxay leedahay awood suuq oo ballaaran, gaar ahaan cayaaraha ...